VPA မှ ကောင်းမွန်သော သစ်တော်အုပ်ချုပ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း | FLEGT
သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဒေသခံ၊ အမျိုးသားအဆင့်၊ ဒေသ တွင်းအဆင့် နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်များတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအကျုံးဝင်ပါသည်။
သစ်တောနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူက မည်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သနည်း။
မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၎င်းတို့ မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်ပြီး မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
၎င်းတို့ကို မည်သို့ တာဝန်ခံစေသနည်း။
သစ်တော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် သစ်တောများမှ အရေးကြီးသော နိုင်ငံဘဏ္ဍာကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည့် အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ အတွက်၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ သစ်တောများသည် ကာဗွန်နှင့်ရေသံသရာ စက်ဝန်းအတွက် အရေးပါသဖြင့် သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အတွက်လည်း အရေးပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်တော်များများသည် သစ်တောများအား အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံ့သယံဇာတအဖြစ် အုပ်ချုပ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအား ထုတ်ယူခွင့်အခွင့်အရေးများ ပေးထားပါသည်။
သစ်တောများပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုအားဆုံးဖြတ်ရာတွင် မကြာခဏဆိုသလို ပွင့်လင်း မြင်သာမှုမရှိပေ။ ပြည်သူများသည် သစ်တောများကိုမည်သူကအသုံးပြုသင့်ပြီး မည်သူက အကျိုးခံစား သင့်သည်ကို သဘောမတူညီကြပါ။ ထိုကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြဿနာများသည် သစ်တောသယံဇာတ နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု ဆီသို့ ဦးတည်စေပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ သစ်တောကဏ္ဍတွင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အားနည်းခြင်းသည် အောက်ပါတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
ရွေးထားသော သို့မဟုတ် အင်အားကြီးသော အဖွဲ့များကို မညီမျှစွာ အကျိုးဖြစ်စေခြင်း
အားနည်းသော သို့မဟုတ် ဘေးဖယ်ထားခြင်းခံရသောအုပ်စုများကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း
ရေရှည်အကျိုးအတွက် စီမံခန့်ခွဲရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် သဘာဝသယံဇာတများ ကုန်ခမ်းသွားခြင်း
သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အားနည်းခြင်းသည် တရားမဝင်မှုကို ဆက်လက်တည်ရှိနေစေပြီး သစ်တောများ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် သစ်တောများကိုစီမံအုပ်ချုပ်ရန် အမျိုးသားအဆင့်ကြိုးစားအား ထုတ်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။
ဆန့်ကျင်ဖက်အနေဖြင့် သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ကောင်းမွန်သောအခါ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ပါဝင်မှုနှင့် အခြားသော အင်္ဂါရပ်များ("မည်သည်က သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကောင်းမွန် စေသနည်း" တွင်ကြည့်ပါ) သည် တစ်ခုကိုတစ်ခု ထောက်ပံ့ပြီးအားဖြည့်ပေးပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် နိုင်ငံ့သစ်တော ကဏ္ဍ၏တရားဝင်မှုကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုပါသည်။ ၎င်းအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် EU သစ်တောဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်များ (VPAs) အား သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးကိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေမည့် လက်နက်ကိရိယာများ အဖြစ်မြင်ပါသည်။ အခြားအကျိုး ရလဒ်များအနက်မှ ယနေ့အထိသဘောတူပြီးသမျှ VPAs များတွင် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။
မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ သစ်တောကဏ္ဍများတွင် ပြည်သူများပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် များတစ်ချိန်လုံးဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
တရားဝင်ဖြစ်မှု၊ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ရေးနှင့် တာဝန်ခံမှုကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းမှုများကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စဉ်းစားချင့်ချိန်ရန်နှင့် တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်း အတွက်မျှဝေနိုင်မည့် အဖြေများကို ဖန်တီးရန်အမျိုးသားအဆင့် အစိုးရနှင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေခဲ့ပါသည်။
တိုးတက်မှုများသည် VPA စာသားများနှင့် နောက်ဆက်တွဲများတွင်ပါသည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကတိကဝတ်များနှင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်မှအစပြုခဲ့ပါသည်။ David Booth နှင့် Sue Unsworth တို့၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆန်းစစ်လေ့လာချက်များအရ VPAs မှ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကို အောက်ပါတို့ကြောင့် ရရှိခဲ့သည်။ ။
ဘုံအကျိုးအမြတ်အတွက် ကြားမှဆက်သွယ်ပေးရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း
ဒေသအဆင့်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ဒေသအဆင့်မှ ဦးဆောင်မှုပေးခြင်း
ပါဝင်လှုပ်ရှားသဖြင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သိရှိနားလည်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုပေးခြင်း
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး VPAs များကိုအထူးသဖြင့် တီထွင်ဆန်းသစ်စေ သည့် အချက်မှာ ၎င်းတို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ပြင်ပမှဖိအားများကို ရှောင်ရှားပါသည်။ ထိုသို့ရှောင်ရှားပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများနှင့် အစိုးရတို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရန်နှင့် စံနှုန်းများရရှိရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို VPAs မှ မည်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည့် VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော ကဏ္ဍများ။ ။
VPA မှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
VPA မှ ဥပဒေပြုရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုမည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း
စွမ်းဆောင်ရည်ကို VPA မှ မည်သို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်သနည်း
မည်သည်က အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေသနည်း။
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ အစိုးရဌာနများသည် သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှဝေရန်၊ ဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု သတင်းပေးရန်နှင့်ဤအကြောင်းကြောင့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်လုံး၏ ယေဘူယျအကျိုးသက် ရောက်မှုကို တိုးမြှင့် ရန် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
တာဝန်ခံမှု။ ပြည်သူများက တာဝန်ယူကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏တာဝန် ဝတ္တရားများသည် ရှင်းလင်းပြတ်သားပါသည်။ စနစ်များကို လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးမှုများဖြင့် ကြီးကြပ်ထားပါသည်။ အစိုးရများက ထိခိုက်ခံစားရသော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးပြီး နစ်နာမှုရှိသောပြည်သူများကို နစ်နာကြေးများ ပေးလျော်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကုစားနိုင်သည့်အခွင့် အလမ်းများရှိကြပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရန် အချိန်၊ ငွေကြေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ဗဟုသုတများရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်ထားသော သစ်တောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာစေသည့် စနစ်များကို လည်ပတ်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင် ရည်သူ့နေရာနှင့်သူရှိနေပါသည်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု။ ဥပဒေရေးရာ အခင်းအကျင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန် ဝတ္တရား များသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးအတွက် ရှင်းလင်းနေပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု။ စနစ်များတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထောက်ခံ မှုရရှိပြီး လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့အတွက်ဖွင့်ထားပါသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု။ အစိုးရများနှင့် ကုမ္ပဏီများသည် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူလူထုများ အသုံးပြုခွင့် ရအောင်ပြုလုပ်ထားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများသည် ပွင့်လင်းပြီး အားလုံးပါဝင်ကြပါသည်။
ပါဝင်ခြင်း။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူကိုယ်စားလှယ်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။
ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ရေး။ ချိုးဖောက်မှုများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။
တရားမျှတမှု။ မူဝါဒများနှင့် ဥပဒေများသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးကို သာတူညီမျှစွာ ဆက်ဆံပြီး ၎င်းတို့တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ လျော့ပါးစေမည့် အစီအမံများ ပါဝင်သည်။ ဥပဒေအား လေးစားလိုက်နာခြင်းသည် အားနည်းချက်တစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။
လွတ်လပ်ပြီးနိုးကြားသောအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း။ နိုင်ငံသားများနှင့်မီဒီယာများသည် သတင်းအချက် အလက်များရရှိပြီး နိုးကြားသည့်အသိရှိပြီး လက်တုံ့ပြန်ခံရမည်ကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲ အစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီများ ကို လွတ်လပ်စွာမေးခွန်းထုတ်နိုင်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေး စိန်ခေါ်မှုများကို VPA လုပ်ငန်းစဉ်များက မည်ကဲ့သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သနည်း။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အဝမလည်ပတ်မီ နှင့် FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနေရာတကျမဖြစ်မီ VPA လုပ်ငန်းစဉ်မှ ဆိုးရွားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင် ဥပမာ နှစ်ခုဖော်ပြထားသည်။
ဂါနာ။ သစ်ခုတ်သူများမှ သစ်အသုံးချခွင့်စာချုပ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာသော ယှဉ်ပြိုင် လေလံဆွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်သာ ရရှိပါသည်။ ပါလီမန်မှ ခွဲဝေချထားပေးခြင်းကို အတည်ပြုစစ်ဆေး ရမည်။ သို့ရာတွင် Ghana Forestry Comission ကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် "အထူးခွင့်ပြုမိန့်" ပေးရန် ဥပဒေတစ်ခုကခွင့်ပြုထားသည်။ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည့် VPA လုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း ဂါနာအရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝန်ကြီးအဆင့်မှ သစ်ခွဲဝေပေးမှုအား တရားဝင် ယန္တရားအဖြစ် ထည့်သွင်းရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက "အထူးခွင့်ပြုမိန့်" သည် ယှဉ်ပြိုင်လေလံဆွဲခြင်းနှင့်မကိုက်ညီဘဲ ကောင်းမွန် သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို အားနည်းစေသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြပါသည်။
VPA အားပါဝင်သည့်အဖွဲ့များက သဘောတူပြီးနောက် ဝန်ကြီးသည်အထူးခွင့်ပြုမိန့်များကို ဆက်လက် ထုတ်ပေး နေခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ JMRM သို့ စာရေးသားပြီး ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှုကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ EU မှ ဤကိစ္စကို ဂါနာအစိုးရအား ဖိအားပေးခဲ့ပြီး အစပိုင်းတွင် ၎င်းအထူးခွင့်ပြုမိန့်များသည် ဂါနာအစိုးရမှ တရားဝင်သည်ဟု ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ EU မှ အထူးခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် သစ်များကို FLEGT လိုင်စင်ထုတ်မပေးနိုင်သလို VPA တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဖော်ပြထားသည့် တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွင်လည်း ၎င်းခွင့်ပြုမိန့်မျိုး မပါဝင်ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆွေးနွေးပွဲများလုပ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်အနေနှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ အထူးခွင့်ပြုမိန့်များ ထပ်မံထုတ်မပေးတော့ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှား။ Indonesian Independent Forestry Monitoring Network (JPIK) တွင် အဖွဲ့အစည်း ၆ဝ ကျော်နှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၃ဝဝ ကျော်ပါဝင်သည်။ ကွန်ယက်သည် VPA တွင် လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် (SVLK ဟုခေါ်သည်) အား စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သစ်တောပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် JPIK သည် အောက်ပါတို့ကြောင့်ပြသာနာများတိုတွေ့ရှိခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နယ်နိမိတ်များ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့နှင့် ဆက်စပ်သောအငြင်းပွားမှုများ
သဘာဝသစ်တောများကို အခြားအသုံးပြုမှုအတွက် ပြောင်းလဲ၍ထုတ်လုပ်သော သစ်တရား ဝင်ဖြစ်မှု ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း
SVLK ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုအားနည်းခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုင်ဆောင်သူများ၏ မလေးစား မ လိုက်နာမှုအတွက် အရေးယူရန်ပျက်ကွက်ခြင်း
အချို့သောSVLK အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ကုမ္ပဏီများပါဝင်ခဲ့သည့် အထောက်အထားခိုင်လုံသည့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများ သို့မဟုတ် တရားမဝင်သစ်လက်ခံမှုများကို စုံစမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှု များမပြု လုပ်ခြင်းအပေါ် JPIK မှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ပြဿနာရှိသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုင်ဆောင်သူများကို ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းမှ တားဆီးရန် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း စံသတ်မှတ်မှု တွင်ပါဝင်သင့်သည်ဟု JPIK က ဆိုသည်။ SVLK အား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သတင်းအချက် အလက်နှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးအတွက် JPIK က တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ တိုင်ကြားခြင်းများကို အမှုဖွင့်ရာတွင် နှင့် ဖြေရှင်းရာတွင် တိုးတက် ကောင်းမွန် အောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
SVLK ၏ ၂ဝ၁၄ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရာတွင် JPIK ၏ အကြံပေးချက်အချို့ကို ရယူခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၅ ဇန်နဝါရီလတွင် VPA အဖွဲ့များကသဘောတူညီခဲ့သည့် Indonesia-EU Action Plan on VPA Advancement သည်လည်းအကြံပြုချက်အချို့ကိုရယူခဲ့သည်။
VPA မှ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
VPA မှ တာဝန်ခံမှုကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
စွမ်းဆောင်ရည်ကို VPA မှ မည်သို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်သနည်း။
အများပြည်သူသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
Bodegom, A.J. et al. 2008.FLEGT beyond T: Exploring the meaning of governance concepts for the FLEGT process. Wageningen University. Netherlands. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Booth, D. and Unsworth, S. 2014. Politically smart, locally led development. Overseas Development Institute. London, United Kingdom. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
JPIK. 2014. JPIK calls the government of Indonesia to improve the timber legality assurance system (SVLK). Press release. 24 November 2014. [အွန်လိုင်းမှဖတ်ရှုရန်]